I-China Submersible Sewage Pump (0.75-7.5Kw) abakhiqizi nabaphakeli | IKAIQUAN
● Amanzi emfucuza namanzi emvula aqukethe okuqinile nemicu emifushane
Ukugeleza: 5-150m3 / h
● Inhloko: Kuze kube ngu-42m
● Ukushisa Kwamanzi: ＜ 40ºC
Ubuningi be-Liquid: ≤1050kg / m3
● PH Inani: 4 ~ 10
I-WQ / EC Series Pump Indle Encwilikayo Encane
Izinzuzo Zempompo Yendle Engaphansi Ye-WQ / EC:
1. Umzimba wepompo okhethiwe kanye nempepho
Ubuchwepheshe be-CAD busetshenziselwa ukuguqula ukwakhiwa kaninginingi, ukuze umzimba wepompo kanye ne-impeller kuhambisane kahle, futhi imicu nemfucumfucu kulula ukuyidlula ngaphandle kokuvaleleka nokuvinjelwa. I-impeller ilinganiselwe ngokuqinile, ukuze ipompo ibe nokudlidliza okuphansi nokusebenza okuzinzile.
2. Imoto ecwilisiwe ethembeke kakhulu
I-submersible motor eklanywe ngokukhethekile neyenziwe ngokukhethekile inezinga lokuvikelwa le-IP68 futhi i-stator emazombezombe ingu-F-class insulation. Ngenxa yomphumela omuhle wokupholisa wokusebenza kokucwiliswa kanye nokuphakama kwangempela kwezinga lokushisa kwamawinding, imoto ihlala isikhathi eside.
3. Imoto inokubekwa uphawu okuqinile nokuhlolwa okuqinile
4. Esinokwethenjelwa sokuthwala ukumiswa
Kukhethwe amabombo we-groove ball ajwayelekile womkhiqizo odumile, anenqwaba yemithwalo eyanele ukuqinisekisa ukusebenza okuthembekile kwemikhiqizo.
5. Umsebenzi wokuxuba iJet
Kuvulwa imbobo yokuxuba i-jet emzimbeni wepompo. Lapho ipompo isebenza, amanzi acindezelayo asepomeni enza indiza enejubane elikhulu emgodini wejet ukuze inyakaziswe ngamandla, ukuze uhla oluningi lokungcola lumiswe, lumunce ipompo futhi lukhishwe. Akukho mvula ezokwakhiwa endaweni enkudlwana, okungcono kunokunyakazisa nje kuphela ethekwini lokuncela ipompo.
6. Idivayisi yokuvikela
Isisetshenziswa sokuvikela ukushisa sifakwe kuma-motor windings. Lapho izinga lokushisa elijiyayo lidlula izinga lokushisa elicacisiwe, into yokuvikela ukushisa izovula ukukhanya kwesikhombisi "okweqile" ngekhabethe lokulawula kagesi bese kuvala ngokuzenzakalela. Khumbuza opharetha ukuthi ahlole ukuthola imbangela yokushisa kakhulu kwemoto. Ngemuva kokushisa kwamaconsi ajikelezayo, into yokuvikela ukushisa izosetha kabusha ngokuzenzakalela, futhi imoto ingavulwa. Kodwa-ke, akumele ivulwe kuze kube yilapho kuqeda ukushisa okunamandla.
Langaphambilini I-Axial engaphansi, Impompo Yokugeleza Ehlanganisiwe
Olandelayo: Submersible Indle Pump （11-22Kw）
Umdwebo nencazelo ye-WQ / EC Encane Yokuntywila Kwendle
Umdwebo Wokwakheka Kwamapayipi Amanzi Amanzi Amanzi WQ / EC
ipompo lamanzi elicwilizayo, i-booster pump, ipompo yokucindezela amanzi, imoto ecwilikayo, intengo yepompo yokucwilisa, ipompo lesimanzi elicwilizayo, ipompo elicwilayo elingaphansi, ipompo evulekile kahle, ipompo lokucwilisa elicwilizayo, i-Submersibl